Siyaasiga Cali-sanyare Oo Aragtiyaha Maxaliga iyo Caalamiga Ah Ee Laga Haysto Tahriibta Ku Lafo Guray Khudbad Uu U Jeediyay Ardayda Jaamacadda Golis |
Siyaasiga Cali-sanyare Oo Aragtiyaha Maxaliga iyo Caalamiga Ah Ee Laga Haysto Tahriibta Ku Lafo Guray Khudbad Uu U Jeediyay Ardayda Jaamacadda Golis
Hargeysa(GNN) Siyaasiga caanka ah ee Cali Ibraahim Maxamed (Cali-Sanyare) ayaa xalay ardayda jaamacada Golis u jeediyay khudbad ku saabsan aragtiyaha waddaniyeed iyo caalami ee tahriibka laga haysto.
Cali-Sanyare, oo xalay khudbadiisa ka jeediyay jaamacada Golis, xarunteeda Hargeysa, wuxuu hadalkiisa ku yidhi “Ma garanayo sida kelmada TAHRIIBTU afkeena hooyo ugu soo biirtay ama u soo gashay. Intii aan ugraadeystay, dadkeenu weligood way dhoofi jireen .Waxaa berigaas lagu tilmaami jiray socdaalkaas “TACABIR”. Qofkuna wuu tacabiri jiray ee muu tahriibi jirin . Labada kelmadood TACABIR IYO TAHRIIBI,asal ahaan, waxa laga soo amaahday afka carabiga ah. Hase yeeshee, aniga way iikala macaanyihiin.TACABIRKA, sidii wakhtiga hore loo fahamsanaa , wuxuu tilmaami jiray qof katalaabaya ama ka-gudbaya badaha iyo soohdimaha dalal kale. Wax ceeb ihina kelmada ku may jirin.
Laakiin,TAHRIIBTU, waxay iila muuqata kelmad kontrabaannimo iyo tuugeysi ku hoos jiro, oo aan laaqi ku ahayn qofka nolol-doonka ah ee socdaalaya. Waxaan doorbidi lahaa, in aan khudbada ku isticmaalo kelmada ,”TACABIRKA” oo keliya. Laakiinse, si da’yartu u fahanto, waxaan Isla-isticmaali doona labada kelmadood oo wada socda.”
Cali, wuxuu intaas raaciyay oo yidhi “Waxa lagu qiyaasay dadkii soo-tacabiry ama soo-tahriibay sanadkii 2014ka ee gaaf- wareegayey dunida,iyagoo ay wehilyeen kuwii saldhigay ee soogalooti dal kale u noqday, ilaa 232 milyan oo qof. Boqolkiiba 48% waxay ka sii ahaayeen haween.Marka tira-koobka la barbar dhigo tirada dadka dunida oo dhan ku nool,waxay ka noqdeen boqolkiiba 3.1%. Waxay warbixinta ILOdu saadaalineysa in tirada dumarka tacabiraya ama tahriibaya ay sii kordhi doonto sanadaha soo socda. Sanadihii 1990kii, wuxuu tirakoobka dadkaas oo dhami ahaa 75 milyan.”
Cali Sanyare oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi “Wuxuu tirada tacabirku ama tahriibtu saddex boqol laabmay muddo rubci qarni ah.Tirakoobku, wuxuu inoo tilmaamaya in haddii isbedel ku Imanin xaaladaha sii xumaanaya ee dunida hadda ka jira, sida dhaqaale xumada, nabadgelyo xumada, shaqo-la’aanta iyo isbedelka cimiladu ay keentay sida roob- yaraanta, in tirada dadka tacabiraya ama tahriibaya ay sii kordhin doonaan.
3). Dadka tacabira amase tahriiba xageebay ka kala yimaadaan ?
Dadka tacabira ama tahriiba badankoodu waxay ka yimaadaan qaaradaha Laatiin Ameeerika iyo Eyshiya. Tirada qaarada Afrika ka timaada waa ta ugu yar. Maalmahan,dad badan oo carbeed ayaa Yurub kusii qolqolaya sababo nabadgelyo xumo oo ka jira dalalkood awgeed.
Berylhii hore dalkeena waxa ka tacabiri jiray dhalinyaro reeruhu iyo qoysaskooduba ku dhiirigeliyaaan tacabirka. Marka laysku raaco qofka dhoofaya ayaa geel loo xaraashi jiray si kharashkii safarka loo xaqiijiyo. Doonyo Berbera ka baxa oo CADAN u socda
ayey sii-raaci jireen. CADAN waxa ku qaabili jiray tolka halka jooga oo Xilku ku wareegi jiray. Iyana, way isa- sii-dhaafin jireen markii khadka labaad ee safarka ay u xidhaan. Qarkood, maraakiibta xamuulka ee Dekedda CADAN ku soo xidha, kuna socda dalka ingiriiska ayey ku sii dhuuman jireen. CADAN waxa xukumi jiray ingriiskii Somalilandna xukumay. Waxay ahayd magaalo camiran oo barwaaqeysan oo leh marso ama deked caalami ah iyo SUUQ ganacsi oo maxmiyadii Somaliland ee Ingriisku gumeysan jiray ay aad ugu xidhneed. Waxaan xasuusta kontamaadka dhamaadkiisii will dalinyaro ahaa wakhtigaas, laakinse aniga aad iiga weyna oo xigto iyo saaxiib ahayn, oo la odhan jiray CABDI CARTE, ayaa Berbera ka dhoofay, Isagoo ku sii jeeda CADAN. Todobaad kadib, waxa naloo soo sheegay inay doontii duufaan qaaday. Dadkii iyo duunyadii ay sideyna ay dhamaantood badii liqday. Markaasbay barootii ka bilamatay guryihii reerka.
Waxaan sheekooyinkan gaagaaban usoo tebiyey, in aan idiin cadeeyo in TACABIRKU ama TAHRIIBTU aanay dalkeena ku cusbeyn. Balse ahayd wax soo jireen ah ilaa
qarnigii labaatanaadka bilowgiisii. Dadkuna wuu isku- wada-raacsana TCABIRKA ama Tahriibta oo waxa loo arki jiray fursad shaqo ama xoogsi.
4) Sababaha dhaliya Tacabirka ama Tahriibta maxay yihiin?
Khubarada ku-xeel-dheer arrintani, waxay xaqiijiyeen in sababaha keeni kara TACABIIRKA ama TAHRIIBTA ay badan karaan. Hase yeeshee lixdan qodob ee hoos ku qorani ay bud-dhig u noqon karaan .Kuwass oo kala ah:
1) Nabadgelyo xumo dagaalo sababeen.
2). Rajo la’aan nololeed oo ay keentay shaqo la’aan baahsani, iyo dhaqaalihii dalalka qaarkood oo si xaq ah loogu haqsoorin bulshada oo markaas dhalisay sadbursi dabqaadeed oo aan weli la toosin.
3) Cimilo xumo ku habsatay dalalka qaarkood oo waxyeeleysay deegaanadii ay ku nooleyd bulshadu iyo hantidoodiiba.
4j. Cadaadis Siyaasadeed ama diineed oo kooxo gaar ah lagu bartilmaasaday.
5). Midabtakoor ama gumeysi bulshada qaarkood lagula kacay.
6) Teknolojiyada dunida maanta laga isticmaalo oo sahashay isku-gudbinta wararka, Isla markaasna fududeysay oo dhiirigelisay dadyowga tacabiraya ama tahriibaya socdaalkooda.
Dadka tacabira ama tahriiba waxay u badanyihiin dhalinyaro ay sideeduba baqashadu ku yartahay. Waxaan yaraanteydii maqli jiray, haddana, dhalinyarada Somaliland joogta qaarkood ku hadaaqaan in tacabirku ama tahriibtu tahay “DHIMASHO ama NOLOL”. Markuu qof da’yar ahi ku qanco odaahda, wuxuu markiiba dumiyey darbigii ku xeerna ee baqashada . Cid soo loodin kartaana ma jireyso Ilaa uu higsigiisii uu soo taabto,amase ,tii alle ba u timaado.
Bal aynu halkan is-yar-dultaagno hadalo dadka qaar ka soo yeedha markii dhimasho laga soo wariyo Tacabirka ama tahriibta. Waxay si dadban oo khaldan dadka ufahamsiiyaan in qofkii ku dhinta tacabirka ama tahriibta aannu geeriyoodeen haddaanu socdaalkaa u badheedhin . Aragtidani waxay khilaafsantahay diinteena suuban ee inoo bayaamisay in wakhtiga iyo meesha qofku ku dhimanayo ay qorantahay oo aan hal daqiiqo la dhaafsiin karin. Geeriyi waa xaq. Imisa dhalinyaro ah ayaa dalka gudihisa ku dhinta, oo qarkoodna ,si darxumo ku jirto u silcayaan.
Markii aan wareystay dhalinyaro ka soo badbaaday safarka, oo hadda ka shaqeysata dalalka Yurub, waxay iixaqiijiyeen in dhalinyarada ka- samatabaxda ay aad iyo aad uga badanyihiin kuwa naftooda ku waaya tacabirka. Warkaas waa la rumeysan karaa. Balse, waxa loo baahanyahay daraasaddu cilmiyeysan oo si ka-xeel dheer u soo tebiya xaqiiqada jirta. Taasina waa masuuliyada xukuumada iyo macaahida ku taakhasusay cilmi-baarista.”
Ugu dambayn Wuxuu Cali hadalkiisa ku soo gunaanaday “Qodobka 23 aad, faqradiisa 1aad ee Dastuurka Somaliland wuxuu u fasaxaya muwadin kasta iyo qof wal oo ajnebi ah oo degan dalka inuu xaq u leeyahay inuu guur-guuri karo,degina karo meelkasta uu rabo. Wuxuu kalo xaq u siinaya inuu dalka ka bixi karo, kuna soo noqon karo markuu doono.
Waxaa kalo jira sagaal heshiis oo caalami ah ( International human rights instruments) oo qeexaya ilaalinta iyo dhowrida xuquuqda dadyowga tacabiraya ama tahriibaya. Heshiisyadaas caalamiga ahi ee Qaramada Midoobay soo saareen waxa ugu horeeya heshiiska caanka ah ee loo-yaqaano ” The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers”. Waxa , iyana, dhaqan galay heshiisyo caalami ah oo la xidhiidha shaqada Iyo shaqaaleynta dadkaas markay saldhigaan dalalka magangelyada siiyey. Heshiisyada waxa ku suntan ILO da waxaanay yihiin:
>>>>>.Convention No. 97: Migration for Employment Convention (Revised) ,1949.
>>>>> Migration for Employment. Recommendation No 86 (Revised), 1949.
>>>>> Convention No. 143: Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975.
>>>>> Migrant Workers Recommendation No. 151 of 1975.
Gebagebadii, waxaan kula talin lahaa xukuumadda Somaliland, ganacsatada ,bulshada rayidka ah iyo, guud ahaan, shacbiga in sida hadda loo fahamsanyahay tacabirka ama tahriibta looga diga-rogto wadatashi ka qotadheer oo kafada -miisaanka lagu saarayo faa’iidooyinka iyo khasaaraha uu tacabirku ama tahriibtu u leeyahay dalka iyo dadkaba.
Waxaa loo baahanyahay in su’aalo layska weydiiyo koboca iyo higsiga dhaqaalaha Somaliland iyo inay muuqato, hadda iyo mustaqbalka dhow Iyo ka fogba, in dhaqaalaha dalku uu abuuri karo kumanaan shaqo oo kala duwan oo kafaala-qaadaaya dhalinyaradeena camal la’aanta la dhex-wareegeysa suuqyada magaalooyinka Somalialnd. Haddii jawaabtu noqoto “HA”, waa Ilaahay mahadee. Haddii kalese
way adkaneysa in hadal madhan oo madhaleys ah oo natiijo la’aan lagu sii madadaaliyo dhalinyarada iyo bulshada Somaliland .
Waxaa hadda cadaatay inay dhalinyarada iyo waalidiintooduba ay dhegaha ka fureysteen guubaabinta natiijo la’aanta ah. Daliilkuna wuxuu yahay iyadoo tacabirkii amatahriibtii ay afar boqol laabantay, saadaashuna tahay inay sii kordhi doonto.
Wadatashiga lagu taliyey wuxuu bulshada u faa’iideen doona arrimaha soo socda:
1). Tacabirka ama tahriibta oo si qotadheer loo fahmo, markii lala saaxiibana, sida dalaka qarkood sameeyeen, faa’iidooyin badan laga midho- dhalin karo.
2). Waxa la arki doona baahida balaadhan ee loo qabo in Siyaasad togan oo istraatiijiyad cad oo waxqabad xambaarsan oo lagu wada- kalsoonyahay la qaato.
3). Waxa ka abuurmi kara wadatashiga aqoon cusub iyo cilmi-baadis saadalin karta muruqmaalka ( human manpower) dhinacyada dhaqaalaha ee dalka looga baahanyahay 50ka (kontonka) sanadood ee socda iyo shaqo- abuurka loo baahnaan doono in la sameeyo oo xukuumaddii timaadaba u sahleysa in qorshahaas ku socoto siina qurxiso.
4). Waxa laga ogaan doona wadatashiga, ahmiyada weyn ee loo qabo isku-xidhka iyo Isku-dheelitirka wax-soo-saarka waxbarashada ( min dugsi hoose-dhexe ilaa Jamicadeed) iyo suuqa shaqada ( labour market) si saadaalinta dhaqaalaha dalka iyo shaqo-abuurka dhalinyarada wax- baratay loo qorsheyn karo.
5). Dhibaatada ugu weyn ee hadda Ina-haysta ee u baahan in sii aqooni ku dheehantahay loogu hortago, intaanay faraha ka bixin, waxay tahay jaamicadihii ( oo mashaa alla) sii tiri badanya, balse intooda badani isku waxna dhigaan, soona saaraan kumanaan dhalinyaro ah oo shahaadooyin la siiyey ,iyadoo nidaamkii shaqo-abuurka ee suuqa shaqadu annu disneyn. Waxa intaas raaca iyadoo, nidaamka musuq-maasuqa ah ee loo yaqaano ” qaataye qaado” ee shaqaalaha dawlada lagu shaqaaleysiiyo uu si taban usii xumeeyey fursadihii shaqo ee koobna ee loogu tartami lahaa si cadaalad ah.”
Isagoo la hadlaya bulshada Somaliland wuxuu yidhi “Ugu dambeyntii, waxaan bulshada Somaliland uga digaya in aynu ku fadhino BAM markuu doono inugu qarxi kara oo waxyeeleen kara nabadgelyada aynu ku naaloono;
haddii aan laga wadatashan,waxna laga qaban shaqo- la’aanta dalka ku habsatay, gaar ahaan, ta dhalinyarada waxbaratay ee sanadwalba sii kordhaya haysata. Caqli dhalinyaro oo fayow iyo shaqo la’aan waa lakala ilaaliya, Haddii caqliga fayow uu mutacaafinimo iyo aqoon ku darsadana, kaba sii daran. Waa kaas BAMKA aynu ku fadhina, inakoo ka dhoohan.”